कुलमान घिसिङ र रबि लामिछाने लाई चुनाव लड्न आग्रह ! – List Khabar
Home / समाचार / कुलमान घिसिङ र रबि लामिछाने लाई चुनाव लड्न आग्रह !
admin2weeks ago समाचार Leaveacomment 94 Views
काठमाण्डौं : नेताहरुको सत्ता मोहको किचलोले गर्दा युवा पुस्ता हरु निरास भएका छन बेला बेलामा कुनै पनि क्षेत्रमा अब्बल र स्थापित ब्यक्तिहरु धुर्मुस सुन्तली रबि लामिछाने
विजय लामाहरु लगायत कुलमान घिसिङ राजनितिमा आउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको वेला फेरि पनि विद्युत प्राधिकरण का पुर्व कार्यकारी लाई चुना’व लड्न आग्रह गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुल
मान घिसिङलाई चुनाव लड्न आग्रह गरिएको छ । गायक तथा अभिनेता रोबिन तामाङले घिसिङलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । गायक तामाङले सोमबार फेसबुकमार्फत घिसिङलाई आउँदै गरेको चुनावमा उम्मे’द्वारी दिन आग्रह गरेका छन् । गायक रोबिन लेख्छन्, “कुलमान दाइ (कुलमान घिसिङ) चुनाव आँउदैछ ।
दाइ म भित्रैदेखि तपाईंलाई उमेदवारी दिन आग्रह गर्दछु, “तपाईंले पक्कै पनि जनताको साथ” पाउनुहुनेछ । म नेपालीले शहिरहेको पीडा देखेर थकित भैसकेको छु, हाम्रो देश धेरै राम्रो हुन सक्छ ।”
रोबिनले आफ्नो साथ सधैं रहिरहने भन्दै ‘ग्रिन पार्टी’ नाम दिएर नयाँ वातावरणको संरक्षण गर्ने एजेन्डा लिएर अघि बढ्न पनि सुझाव दिएका छन् । उनको यो आग्रह र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।
“कृपया मेरो कुरामा गम्भि’रतापूर्वक सोच्नुहोला, अब त अति भैसक्यो, अब आउने पुस्ताको हितका लागि हाम्रो देशलाई परिवर्तन गर्ने समय आाइसकेको छ । तपाईसँग मेरो सम्पूर्ण साथ छ । अन्यथा हामी त्यही पुराना जोकर हरुकै फन्डामा पर्छौं,” उनले भनेका छन् ।
यो पनि चर्चित प’त्रकार रबि लामिछाने यति बेला धेरै दर्शक हरुको धन्यवादको पा’त्र बनेका छन!हाल सं’क्रमित को महामा’री मा नेता कुर्सीको लागि लड्दै छ भने पत्रकार रबि फिल्डमा निस्केर जनताको लागि अ”क्सिजन संगै जनमैत्री हस्पिटल सुचारु संगै सयौं सं’क्रमित हरुले उप’चार गरिरहेका छन !
भने आहान पनि गरेका छन यो जन’मैत्री हस्पिटलमा पैसा नहुनेले निशुल्क उप’चार गर्न सक्नु हुनेछ !रबिको तारिफ गर्दै जि’वन लुइँटेलले लेखेला छन “बर्तमान देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको कहाली ला’ग्दो अवस्था र जनताको अपेक्षालाई गहिरिएर नियाल्दा तत्काल स्वास्थ्य सं’कट”काल लगाएर
Previous १८ वर्षीय अशोक जसले अस्पतालको शैयाबाट आफ्नो ज्यानको भिख मागे
Next भाईरल सासु- बुहारी र नन्द एकै साथ मिडियामा, यस कारण मन पराए सबैले यो परिवारलाई (भिडियो सहित)